ဖဲမုႈလြံႈနံၚဖးဒိဥအနံၚ Manila ကဥဒံဥနဲဥ ကသ့ကြံဏဝဲ ခိဥနႈလ႕ အဘဥတႈဃုထ႕ထီဥတ့ႈလံ သ့ဥတဖဥ အခီဥအဂ့ႈ တႈကစီဥ | Radio Veritas Asia
မနံဥလဥ သီခါကရ႕ခိဥဖးဒိဥ Jose. F. Cardinal Advincula ကသ့ကြံဏဝဲပွၚ ၁၂ ဂၚ သ့ဥတဖဥ အခီဥ ပွၚသ့ဥတဖဥအံၚ ကမ့ႈဝဲ လ႕တနံဥအံၚ အတီႈပူၚ ကကဲထီဥဝဲ လ႕အဘဥဃးဒီးထံလီႈကီႈပူၚ ဒီး လီႈကပီၚ ခိဥနႈ လ႕အကဘဥတႈဃုထ႕ထီဥ ဖဲ လါမ့ၚ ၉ သီ န႔ဥလီၚ.
တႈသ့ကြံဏခီဥအမူးန႔ဥ မ့ႈဝဲဒဥတႈတမံၚလ႕ ကစႈခရံာ္ အီဥတႈအီတႈလ႕ ဟါခီ ဖဲမုႈလြံႈနံၚဖးဒိဥတႈလုႈမံၚဆါ လ႕ လါအ့ဥျဖ႔ဥ ၁၄ သီ ၂၀၂၂နံဥ လ႕ Manila Cathedralန႔ဥလီၚ.
ဒ္မနံဥလဥ သီခါကရ႕ခိဥ တႈကစီဥပာ္ဖ်ါဝဲအသိး ပွၚသ့ဥတဖဥ (ပိဏ ခြါ ႏြံဂၚယ ပိဏမုဥဎဲႈဂၚ) လ႕ ကဥဒံဥနဲဥ ကသ့ကြံဏဝဲဒဥ အခီဥသ့ဥတဖဥန႔ဥမ့ႈပွၚလ႕ အိဥဝဲဒဥလ႕ လီႈကဝီၚ တႈလီႈလီၚဆီလိၚအသး ကဟံန႔ဥဝဲဒဥ တႈလီႈလ႕ အရ႔ဒိဥအကါဒိဥသ့ဥတဖဥ လ႕ ပွၚကဃုထ႕ထီဥ ထံကီႈခိဥနႈ အလီၚအလးသ့ဥတဖဥအက်ါန႔ဥလီၚ.
ကဥဒံဥနဲဥ ကသ့ဝဲဒဥ ပွၚသ႕ဂၚလ႕ ကဟ့ဥဝဲ Votes အခီဥထံးတဘ်ီ လ႕ပွၚသ့ဥတဖဥလ႕အမ့ႈဝဲ Electoral Board, officials of the Commission on Election (COMELEC) ယ Member of the Parish Pastorl Council for Responsible Voting (PPCRV),achurch-based poll watch body, ဒီးamember of the press သ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ.
ဖဲအပူၚကြံႈတနံဥအခါ မနံဥလဥ သီခါကရ႕ခိဥလ႕အမ့ႈဝဲတႈအိဥဖွိဥအခိဥအနဥ လီႈလံဥ Bishop Broderick S. Pabillo သ့ဝဲဒဥ ပွၚလြံႈ ဂၚ လ႕ 'ပွၚစိဥတႈသးခုကစီဥ' (New Missionaries)တႈကရ႕ကရိအက်ါန႔ဥလီၚ. ဒီး'ပွၚစိဥတႈသးကစီဥ' အတႈကရ႕ကရိသ့ဥတဖဥ အဂီႈ ပွၚ မၚတႈသ့ဥနီဥထီဥအနံဥတကဎၚ အနံဥဆဲးဆ႕ လ႕ အဝဲသ့ဥဟဲစိဥဝဲခရံာ္အတႈသးခုကစီဥ ဆူ ကီႈ ဖံဥလံဥပံ အပူၚ န႔ဥဒီး တႈတနံဥန႔ဥစ့ဥကီး မ့ႈဝဲဒဥလ႕ ပွၚမၚဝဲဒဥ Missio ad Gentes (mission towerd all the people) န႔ဥလီၚ.
ဖဲအပူၚကြံႈ လါမးရွါ ၂၇ သီအခါ ကီႈဖံဥလံဥပံ သီခါကရ႕ခိဥ အလီႈခ႕ႈသး (CBCP) ပာ္ဖါထီဥဝဲအလံာ္ျပ႕တဘ့ဥဆူပွၚဘါဎြၚဖိသ့ဥအအိဥဒ္သိးဒီးကဃုထ႕ဝဲဒဥထံကီႈခိဥနႈသ့ဥတဖဥလ႕ ကမၚလဲၚထီဥလဲၚထီ ပွၚ ဖံဥလံဥပံ အကမ်႕ႈသ့ဥတဖဥန႔ဥလီၚ.
လ႕အဘဥဃးဒီး လံာ္ျပ႕န႔ဥအဃိ လ႕လါ အ့ဥျဖ႔ဥ ၆သီ ၂၀၂၂နံဥ လ႕ the shrine of our Mother of Perpetual Help (Baclaran Church) န႔ဥ ပွၚလုႈထီဥတႈလုႈမံၚဆါလ႕ ကဟ့ဥဝဲဒဥ Moral Vote အဂီႈ ဒ္သိးဒီး ပွၚကထ႕ရ႔ြဝဲဒဥထံကီႈခိဥနႈ ဂ့ၚဂ့ၚဝါဝါ ဖဲ လါမ့ၚ ၉သီ ၂၀၂၂ န႔ဥလီၚ.
ကဥဒံဥနဲဥ Advincula တီခိဥရိမဲဝဲဒဥ တႈလုႈမံၚဆါ ဒီး သီခါကရ႕ခိဥ Pablo Virgilio David လ႕အမ့ႈဝဲ ကႈလိဥကဥသီခါကရ႕ခိဥ ဒီး CBCB လီႈခ႕ႈသး အခိဥက်႕ႈ စံးတဲၚတဲလီၚတႈန႔ဥလီၚ.
တႈသ့ကြံဏခီဥ အမူးန႔ဥမ့ႈဝဲဒဥတႈတခါလ႕ ပာ္ထြဲဝဲဒဥဖဲ ဟါခီတႈဘူဥတႈဘါလ႕ ကစႈခရံာ္အီဥတႈအီတႈလ႕ ဟါခီန႔ဥလီၚ.
တႈသ့ဥတဖဥန႔ဥမ့ႈတႈလ႕ တႈသ့ဥနီဥထီဥက့ၚကစႈခရံာ္အီဥတႈအီတႈလ႕ အလီႈခံကတ႕ႈ တဘ်ီလ႕ အဝဲဒဥ တခ်ဳးဒိးန႔ႈတႈနးတႈဖွီဥဘဥအခါန႔ဥလီၚ. ဖဲအကီဥခါန႔ဥအဝဲဒဥစ့ဥကီး သ့ကြံဏဝဲဒဥအပ်ဲႈအဘီဥသ့ဥတဖဥ အခီဥန႔ဥလီၚ. တႈလ႕တႈအဟဲလီၚစ႕ၚလီၚသြဲဥတခါအံၚမ့ႈစ့ဥကီဥလ႕ ဒုးသ့ဥနီဥထီဥက့ၚပွၚကဲးသလံးဖိသ့သတဖဥလ႕ ကမၚန႔ႈပွၚအဂၚအခ့အပွၚတႈမၚလ႕တႈဆီဥလီၚသူဥဆီဥလီၚသးအပူၚအဂီႈန႔ဥလီၚ.